Waa maxay favicon sideese uga samaysan kartaa mid boggaaga | Abuurista khadka tooska ah
Encarni Arcoya | | Astaamaha
Xaqiiqdii, in kabadan hal munaasabad, waxaad maqashay favicon. Tani waxay xiriir dhow la leedahay naqshadeynta websaydhka, waana qodob muhiim ah oo bog kasta ku yaal, ha noqdo dukaan internet ah, baloog, degel, iwm. way ku waydiinayaan. Laakiin, Waa maxay favicon? Maxaa loogu talagalay Iyo tan ugu muhiimsan oo dhan, sidee loo sameeyaa?
Haddii aad shaki badan ka qabto arrintan, halkan waxaan ku siineynaa furayaasha si aad u fahanto iyo, wixii ka sarreeya, si aad ugu soo bandhigto mashruucaaga dhexdiisa oo aad uga tagto bandhig wanaagsan. Waan kuu xaqiijinaynaa!
1 Waa maxay favicon
2 Muxuu favicon muhiim u yahay?
3 Sida loo sameeyo favicon
3.2 Adeegsiga qalabka internetka
3.3 Iyadoo WordPress
Waxaan ku bilaabaynaa inaan sharaxo waxa favicon yahay si aad u fahanto. Iyo, tan, wax ka fiican maaha inaan ku siiyo tusaale wax ku ool ah. Ka soo qaad in aad daalacaneysid hadda (runti, waad na aqrinaysaa). Laakiin ma lihid hal tab, laakiin dhowr ka mid ah. Waxaa laga yaabaa inaad dareentay, mid kasta oo ka mid ah, magaca waxa boggaasi ka muuqdo inuu muuqdo, ha noqdo YouTube (maxaa yeelay waxaad dhagaysanaysaa muusigga asalka ah), Gmail (maxaa yeelay boostadaadu way furan tahay) ama boggan.
Magac kasta agtiisa, bidixda, sawir yar ayaa ka muuqda, oo laba jibbaaran. Mid ka mid ah YouTube-ka iyo Gmail-ka ayaa hubaal ah in lagu garto astaamaha ay wataan, laakiin ka warran inta hartay ee tabs ah?
Hagaag, waxaad aragtaa runti waa favicon. Si kale haddii loo dhigo, waa a astaan ​​la xiriirta bogga aad booqaneyso, Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in fiiro gaar ah loo yeesho faahfaahintaan, maxaa yeelay markaad ku darto bog kuwa ugu cadcad ama tuuryo, favicon wuxuu noqdaa "sawirka" boggaas waana sababtaas darteed waa inaad daryeeshaa qaabkeeda si ay la xidhiidha si dhammaystiran (iyo wixii ka sarreeya dhammaantood waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan in laga sooco kuwa kale).
Astaantan yar ayaa badanaa leh xajmi cabbirkiisu yahay 16 × 16 pixels (in kasta oo sidoo kale lagu dhejin karo 32x32px). Gudaha gudihiisa waa inaad ka taxaddartaa in wax kasta oo aad dhigto si sax ah loo arko maaddaama, haddii kale, waxay u muuqan doontaa meel yar oo la aqoonsan karo (taasina waxay ku siin doontaa sawir aad u xun boggaaga).
Muxuu favicon muhiim u yahay?
Hadda oo aad ogtahay waxa favicon-ku yahay, oo aad ku dhex heshay bogagga inta badan aad furto, miyaad ogaatay in maanta ay jiraan tiro ka yar iyo ka yar oo maqan? Tani waa sababta oo ah runtii aad ayey muhiim u tahay in la bixiyo aragti hufnaan iyo aqoon-sida loo yaqaan. Taasi waa, waxaad gudbin doontaa sumad ama muuqaal shirkadeed oo daneeya faahfaahinta.
Si kastaba ha noqotee, favicon sidoo kale wuxuu leeyahay adeegsiyo kale sida:
U adeegso sidii aqoonsi u ah boggaaga. Badanaa favicon-kani wuxuu la xiriiraa astaanta aad ku leedahay boggaaga, oo keliya cabbir yar. Laakiin marka astaantu aad u weyn tahay oo aan lagu arki doonin badhanka yar, waxaad u jeeddaa inaad doorato wax la xidhiidha.
Waxaad ka caawin doontaa isticmaaleyaasha keydiyay boggaaga inay muuqaal ahaan u aqoonsadaan. Marka, xitaa haddii aysan xusuusan url, ama magaca shirkadda, sawirka favicon darteed way heli doonaan.
Inaad "wanaagsanaato" SEO. Tan waa in lagu qaataa badar milix ah. Waana in haysashada ama la'aantu favicon aysan si toos ah u saameyn doonin SEO (taasi waa, kuuma dejineyso wanaag ama xumaan inaad haysato iyo in kale). Hadda, waa wax aad iyo aad u badan in, markii biraawsar galo bog, uu raadsado favicon-kaas, markii uusan helinna, markaas wuxuu siiyaa khalad 404. Waadna ogtahay in khaladaadkan aysan u fiicnayn SEO-ga ee bogga.
Sida loo sameeyo favicon
Ka dib markaad aragto, way cadahay in favicon uu yahay cunsur muhiim u ah markaad leedahay degel. Hadda, sidee u samaysaa mid?
Waa inaad ogaataa in, xaaladaha badankood, waxa ay qabato ay tahay dooro astaanta boggaas, ama haddii ay aad u weyn tahay, wax lagu garto. Tusaale ahaan, ka soo qaad in aad leedahay degel telefishan aad si uun ugu yeedhay. Laakiin taasi, favicon, waa mid aad u weyn. Taabadalkeed, waxaad dhigi kartaa sawir telefishanka si ay ula wadaagaan. Xaaladahaas oo kale, waxaa lagugula talinayaa inay xirto midabyo isku mid ah sida boggaaga si ay si fiican u aqoonsadaan.
Oo hadda, sidee u abuuri karnaa favicon? Hagaag, waxaad haysataa fursado dhowr ah:
Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadlaynaa barnaamijyada wax ka beddelka muuqaalka maaddaama favicon loo abuuray si isku mid ah sida sawirka. Dabcan, waa inaad ku keydisaa qaab .ico ah si loogu aqoonsado inay tahay maxaa yeelay looma dhaafi karo jpg, gif ama wax lamid ah.
Sidan oo loo sameeyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fiican u habeysid favicon, maaraynta si aad uga abuurto xoqdo una siiso dhammeystirka aad rabto. Caadi ahaan tan waxaad ku shaqeysaa sawir cabbirkiisu caadi yahay ka dibna waxaad la qabsanaysaa cabirka badhankaas.
Xaqiiqdii ka dib, waa in la soo galiyaa oo lagu tijaabiyaa daalacashada kala duwan si loo arko haddii ay fiicantahay, waa mid wakiil ah oo, wixii ka sarreeya, waa la fahmay.
Adeegsiga qalabka internetka
Xaaladdan oo kale waxaan u tixraacaynaa bogagga shabakadda ee ka taxaddaraya in sawir kasta oo aad rabto loo beddelo favicon ilbiriqsiyo gudahood. Laakiin sidoo kale waxaad leedahay ikhtiyaarka ah toos ugu qaabee favicon-kaaga bogaggaas.
Haddii aad rabto tii hore (sawirka soo gal oo u beddelo), markaa waxaan kugula talineynaa Favicon Generator ama Favic-o-matic. Laakiin haddii aad rabto tan dambe (ka naqshadee xoq), sharad ku qor favicon.io ama x-icon tifaftire.
Boggaaga ma lagu sameeyay WordPress? Oo ma ogtahay inaad u isticmaali karto nidaamkaas inaad ku abuurto favicon-kaaga. Tan darteed waxaad u adeegsan kartaa qaar ka mid ah fiilooyinka kuu oggolaanaya inaad sameysato badhan ku saleysan sawir aad soo dejisay (ama aad soo dejisay). Sidoo kale iyada oo loo marayo "Muuqaalka / Habee" waad sameyn kartaa.
Markaad favicon dhamayso, waa inaad ku dhejisaa websaydhkaaga oo aad u aqoonsataa inay awood u leedahay inay ku muujiso aagga bidix ee magaca boggaaga, iyo sidoo kale markaad ku kaydinaysid kuwa ugu cadcad. Sidan ayay si fudud kuu aqoonsan doonaan iyagoon u istaagin inay wax akhriyaan haddii ay tahay bogga ay runtii doonayeen inay booqdaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Astaamaha » Waa maxay favicon